नजिक न्युज | आत्ममुग्ध व्यक्ति कसरी सफल हुन्छन् ?
अति आत्मविश्वासको खतरा धेरै छ । आफ्नै बारेमा गलत धारणा बनाउने मुर्खताले कति गल्ती गर्न सक्छ । त्यसो भए फेरि आत्मविश्वासले भरिएका मान्छेहरुको सफलताको राज के हो ?
सोमबार १२, साउन २०७७ ०४:२२ मा प्रकाशित